Saurik nandefa Cydia Impactor mba hanafoanana ny famonjana | Vaovao IPhone
Saurik nandefa Cydia Impactor hanala ny Jailbreak
Vaovao tsara ho an'ny olona ao amin'ny fiarahamonina Jailbreak. Vao namoaka fitaovana iray i Saurik izay hamela anao hanaisotra ny Jailbreak amin'ny iPhone na iPad nefa tsy mila manavao ny rafitra intsony. Ity fitaovana ity dia tena tweak antsoina hoe "Cydia Impactor", izay ahafahantsika manafoana sy mamerina ny fanovana rehetra natao tamin'ny fitaovana iray miaraka amin'ny Jailbreak hamerenana azy amin'ny fikirakirana azy voalohany, tahaka ny famerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana. Ity tweak ity dia mahasoa tokoa ho an'ireo izay miverina tsy misy jailbreak noho ny antony sasany ary hamonjy antsika amin'ny fanavaozana izany.
Ny zavatra tena mahaliana amin'ity tweak ity, araka ny efa nolazainay, dia ny fahafahanay miverina amin'ny iOS madio tsy mila manao fanavaozana rehefa mijanona ny sonia iOS ny kinova farany misy ny Jailbreak fa misy amin'ny izany fotoana izany. Miaraka amin'ny Cydia Impacter ianao dia hiverina amin'ny fanjakana tany am-boalohany ny iPhone tsy mila zavatra hafa, mora, haingana ary tsotra be. Cydia Impactor dia toy ny Ilex Rato na SemiRestore, miaraka amin'ny tombony an'io fitaovana io noforonin'i Saurik tenany.
Cydia Impactor 0.9.15 dia ao amin'ny beta ankehitriny ho an'ny iOS 8.3 sy iOS 8.4, ka alohan'ny hampiasana an'io fanovana io dia manoro hevitra anao mafy izahay mba hamerina amin'ny iTunes na iCloud ny fitaovanao hahazoana antoka fa tsy ho very ny mombamomba anao rehetra. Hamafa ny angona rehetra i Cydia Impactor. Vantany vao novonoina ianao dia mila mamerina mamerina ilay fitaovana ary mandroso amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fananganana voalohany toy ny namerina ilay fitaovana. Saurik dia nitatitra ihany koa fa zava-dehibe ny tsy hikasika ilay fitaovana raha mihazakazaka i Cydia Impactor hisorohana olana, ary ambonin'izany rehetra izany dia tokony hifandray amin'ny Internet sy miaraka amin'ny bateria mihoatra ny 50% ny fitaovana.
Ny vondrom-piarahamonina Jailbreak dia azo antoka fa mandray an'ity fitaovana tena ilaina ity, ary manamarina fa mbola eo an-tampon'ny lalao i Saurik amin'ny fampivoarana ireo fanontana ny Jailbreak. Fantatrao izao, raha te hamerina ny iPhone amin'ny toetrany voalohany ianao satria tsy milamina ny Jailbreak, na efa reraky ny Jailbreak fotsiny ianao, izao no fotoanao, sintomy Cydia Impactor ary avelao ho vaovao ny fitaovanao.
name: Cydia Impactor
mifanentana: iOS 8.3+
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Saurik nandefa Cydia Impactor hanala ny Jailbreak
34 hevitra, avelao ny anao
desirerio dia hoy izy:
Tsia ilaina, ny manaraka!
Valio i desirerio
Mety hahasoa kokoa raha toa ka mifanaraka amin'ireo kinova ios taloha, saingy manana ios 8.1 aho, tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mamerina amin'ny iTunes. Nanantena ny hanaisotra ny jailbreak aho ary hanavao amin'ny alàlan'ny OTA!
Juan Ojeda dia hoy izy:
Hanafaka ny cydia impactor ho an'ny iOS 8.1?
Valiny tamin'i Juan Ojeda
Diso ny fanazavanao azy, raha mamafa ny data rehetra izy, izany rehetra izany, izany no antony nilazany fa toy ny semiretore sy ilexrat, ary napetrakao ity: avereno daholo ny fanovana natao tamina fitaovana iray miaraka amin'ny Jailbreak hamerenana azy ny fametrahana azy am-boalohany, nefa tsy very data. amin'ny fehintsoratra voalohany, ovao izy satria diso ny ataon'ny olona ...
Betsaka kokoa ny ao amin'ny tweak podrio raha vao apetraka mazava tsara amin'ny mena eo ambany, mamafa ny data rehetra sy ny unjailbreak device, ovao haingana araka izay azo atao Miguel !!!
Salama, salama tsara Jesosy. Marina izany, hoy aho nidina lavitra tao amin'ny lahatsoratr'ilay lahatsoratra, saingy sahirana aho nanoratra. Misaotra ny naoty ary ahitsy dieny izao. Fiarahabana sy fisaorana tamin'ny famakiana.
Marina ny anao fa misy foana ny olona tsy mahay mamaky ny lahatsoratra iray manontolo ary mieritreritra fa ny andalana voalohany na ny roa voalohany ... fa mieritreritra izy fa tsy ho very sary sns sy wham, izany no antony zava-dehibe ny hanovanao azy haingana araka izay tratra (hitako hatrany, andalana 1 andalana 4).
Miarahaba anao Miguel!
Ela vao naseho, fa efa novaina. Miarahaba sy misaotra an'i Jesosy.
Marina izany, nisafotofoto aho, novakiako fa tsy nisy voafafa tamin'ny angon-drakitra ary navelako tao anatin'ireo fanehoan-kevitra ireo ny fiokoana tao amin'ireo lahatsoratra ireo, vao nesoriko ny fisalasalana rehetra.
George avram dia hoy izy:
Ahoana ny fanesorana ny jailbreak? Inona no nitranga?
Valiny tamin'i George Avram
Tsy mamaky hatramin'ny farany ny olona fa amin'ny fehezan-teny voalohany napetrakao hoe "mamela anay hamafa sy hamerina ny fanovana rehetra natao tamin'ny fitaovana iray miaraka amin'ny Jailbreak hamerenana azy amin'ny fikirakirana voalohany izy, nefa tsy ho very data tanteraka." Tsara raha esorinao izany satria very ny angon-drakitra ary mifanohitra amin'izay apetrakao amin'ny faran'ny lahatsoratra izany.
Vahaolana efa voavaha. Misaotra tamin'ny famakiana sy ny arahaba indrindra.
Tonga lafatra izao. Misaotra betsaka.
Mauricio D. Gonzalez Garcia dia hoy izy:
Alohan'ny hanomezana ny hevitrao dia vakio tsara ilay lahatsoratra.
Ny famakiana dia tsy mandany vola ary tsy manimba.
(Hofafàn'i Cydia Impactor ny angona rehetra. Rehefa vita dia mila mamerina mamerina ilay fitaovana ianao ary miroso amin'ny dingan'ny fananganana voalohany toy ny namerina ilay fitaovana.)
Valiny tamin'i Mauricio D. Gonzalez Garcia
Valdo_punk@hotmail.com dia hoy izy:
Ka tsy maninona ny famerenana amin'ny laoniny ny toeran'ny orinasa, sa tsy izany? Farafaharatsiny mba hamerenako ny iPad ahy io tsotra io, nesoriko ny jailbreak tsy nisy olana.
Victor Red dia hoy izy:
Fihomehezana, fitaovana tsara
Valiny tamin'i Victor Rojo
Tsy isalasalana fa eo amin'ny iOS 8.3 aho saingy kamo be ny mamerina azy amin'ny iTunes ary manavao izany amin'ny 8.4, raha averiko amin'ity fitaovana ity ve aho afaka manavao amin'ny OTA? Manana iPad Air 1G aho
Sapic dia hoy izy:
Valdo_punk. Tsara izany raha toa ka tsy manana jailbreak ilay kinova ampiasan'ny Apple rehefa mamerina amin'ny laoniny izy ary tianao hadio indray ny JAILBREAK.
Manontany an'i Miguel herandez aho izao. Tsy milaza na inona na inona ianao momba ny mety haha-jailbroken azy indray .. Manantena aho fa hamaly ianao ary misaotra anao noho ny vaovao ato amin'ity fanovana ity.
Miguel Hernandez. Manana fanontaniana hafa aho. Fantatrao ve ny fomba famahana ny lesoka omen'ny iOS 8.3 rehefa misintona fampiharana vaovao ao amin'ny AppStore? Mandingana ny i5 aho mankany amin'ny maody azo antoka ..
Mamaly an'i Sapic
Misaotra; Ny tiako holazaina dia ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra, ny ankapobeny, ny famerenana amin'ny laoniny, ny famafana ny atiny sy ny fikirakira dia mamela ilay fitaovana amin'ny kinova mitovy aminao ihany, izany hoe tsy mampakatra ilay kinova ianao, manala ny jailbreak fotsiny; Hafa ihany izany rehefa mamerina amin'ny iTunes ianao, satria manery anao hanavao izany.
IPhone Esteban dia hoy izy:
valdo_punk, raha manana jailbreak ianao ary mametraka ny famerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana dia tsy mihoatra ny sakana izany fa mijanona ao anaty loop iray, azonao atao ny manamarina azy raha tsotra toy izany, tsy misy ilana azy ity tweak ity raha toa izy ireo namorona azy
Valiny amin'ny iPhone Esteban
jsg dia hoy izy:
e indray ilay JAILBREAK madio ..
Manontany an'i Miguel herandez aho izao. Tsy milaza na inona na inona ianao momba ny mety ho jailbroken indray .. Manantena aho fa hamaly ianao ary misaotra anao valdo_punk, raha manana jailbreak ianao ary mametraka ny famerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana, dia tsy avy amin'ny paoma izany fa mijanona ao anaty loop iray, azonao atao Hamarino
Miguel Hernandez. Manana fanontaniana hafa aho
Mamaly an'i jsg
cleardrain dia hoy izy:
jailbreak indray .. Manantena aho fa hamaly ianao ary misaotra anao valdo_punk, raha manana jailbreak ianao ary mametraka ny famerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana dia tsy avy amin'ny paoma izy io fa mijanona ao anaty loop iray, azonao atao ny manamarina azy
Manontany an'i Miguel herandez aho izao. Tsy milaza na inona na inona ianao momba ny mety haha-jailbroken azy indray .. Misaotra; Ny tiako holazaina dia ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra, ny ankapobeny, ny famerenana indray, ny famafana ny atiny sy ny fikirakira dia mamela ilay fitaovana amin'ny kinova iray ihany
Mamaly an'i cleardrain
kamson dia hoy izy:
Mamaly an'i kamson
wcellar dia hoy izy:
IANAO ANATRANA ANDROID
Mamaly an'i wcellar
wcellar2 dia hoy izy:
Tsara izany raha toa ka tsy manana jailbreak ilay kinova ampiasan'ny Apple rehefa mamerina amin'ny laoniny izy ary tianao hadio indray ny JAILBREAK.
Valiny amin'ny wcellar2
MWC dia hoy izy:
Ny tiako holazaina dia ny famerenana amin'ny laoniny ny toe-javatra, ny ankapobeny, ny famerenana indray, ny famafana ny atiny sy ny fikirakira dia mamela ilay fitaovana amin'ny kinova iray ihany
Valiny amin'ny MWC
mwcc dia hoy izy:
manaiky aho …………………………….
Mamaly an'i mwcc
mwccc dia hoy izy:
Nataoko fa tonga ny viriosy ...
Mamaly an'i mwccc
xoxo dia hoy izy:
Mamaly an'i xoxo
carbeauty dia hoy izy:
Mamaly an'i carbeauty
confismile dia hoy izy:
Valiny momba ny fisafotofotoana
https://www.hkta.edu.hk/ dia hoy izy:
tiako io ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valio ny https://www.hkta.edu.hk/
pappetpet dia hoy izy:
helloz ~~~ !!
Cydia Impactor: esory amin'ny fitaovanao ny Jailbreak